Xog:- Maxaad kala Socotaa khilaaf hoose oo soo kala dhexgalay Farmaajo iyo Kheyre? | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xog:- Maxaad kala Socotaa khilaaf hoose oo soo kala dhexgalay Farmaajo iyo Kheyre?
Khilaaf aad u xooggan balse aan weli soo shaac-bixin ayaa ka dhex qarxay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Khayre oo isku haysta qofka loo magacaabayo guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib markii uu geeriyooday Eng Cabdiraxmaan Yariisow.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in khilaafkan ba’an ee labada mas’uul uu ka bilowday kadib markii madaxweyne Farmaajo uu diiday in guddoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabo nin magaciisa lagu sheegay Abuukaate Cumar Dhegeey oo saaxiib la ah Ra’iisul wasaare Khayre.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Ra’iisul wasaaraha u sheegay in Abuukaate Cumar Dhegeey uu yahay nin si adag u aaminsan waxaa loo yaqaan “Maqaamka Muqdisho” sidaasi darteedna uu dowladda caqabad ku noqon doono.
Balse Ra’iisul wasaare Khayre ayaa isna madaxweynaha ku tuhmay in uu rag kale u wato booska isagoo ku adkaystay in Cumar Dhegeey xilkaasi loo magacaabo haddii la doonayo karti iyo waxqabad.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha oo khilaafkoodu meel sare gaaray ayaa sida la sheegayo weli isku mari la’ magacaabista cidda noqonaysa guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Previous articleAlshabaab kayimid dhinaca Somaliland oo ciidanka Puntland ay ku qabteen gobolka Sanaag + Xog ay saxaafadu ogaatay.
Next articleMuuse Biixi iyo Wasiiro katirsan DfS oo kulan aan filayn ku qaatay sucuudiga.